I-LG Q7 iza kufika eSpain ngoJuni nge-349 euro | Iindaba zeGajethi
Enye yeemodeli zakutshanje ze-LG yaseKorea iza kufika eSpain kungekudala. Ngokwenkampani uqobo, I-LG Q7 izakuvela kwindawo kuloJuni uzayo (ngaphandle kosuku oluthile) kwaye iyakwenza njalo ngexabiso elingaphantsi kwe-400 euro. Iselfowuni engenamanzi yindlalifa ye-LG Q6 kwaye iza ukuzibeka njengenye yeendlela ezizezinye phakathi kuluhlu oluphakathi.
I-LG Q7 yifowuni efanelekileyo eza kuvela kwindawo enohlobo lwamva nje lwe-Android, I-Android 8.1 Oreo. Ikwayiqela elinomdla, kokubini kuyilo kunye nokusebenza. Ukuqala, siza kuba nefayile ye- efowuni idayagonal ye 5,5 intshi kunye nesisombululo esiphezulu seepixels ezingama-2.160 x 1.080. Ukongeza, yongeza kwindlela ye-18: 9 ratio.
Kwelinye icala, ngaphakathi siya kuba neprosesa eyisi-1,5 engundoqo kwi-XNUMX GHz yokusebenza rhoqo kwaye iya kukhatshwa yifayile ye- I-3 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yendawo yangaphakathi. Ewe, ukuba unqwenela ukwandisa esi sithuba ukuya kuthi ga kwi-2 TB usebenzisa amakhadi e-MicroSD.
Yintoni enye onokuyifumana kule mobile? Ewe, isisu semoto esilungiselelwe yonke into. Oku kuthetha ukuba i-LG Q7 iyakwazi ukumelana namanzi kunye nothuli. Ke unokuba liqabane lethu lokuzonwabisa nakweyiphi na imeko. Ikwaqaqambisa ikhamera yayo ye-13-megapixel ngasemva, nangona i-LG ingakhange ikhethe ukudibanisa iilensi ezimbini njengoko icandelo lisiyalela.
Ewe kunjalo, bebephethe ukongeza ukutshaja okukhawulezayo kuluhlu lwe-Q ukuze babe namandla angaphezulu ngexesha elincinci kwibhetri ye Iimitha ezingama-3.000 Ukuhamba neqela, ngokunjalo Itekhnoloji ye-NFC ukuba sifuna ukusebenzisa izixhobo ezihambelanayo okanye sisebenzisa iintlawulo ezihambayo, into esasazeka kwiivenkile ezininzi.
Njengoko besikuxelele, i-LG Q7 ifika eSpain phakathi kuJuni olandelayo-sicinga ukuba inkampani iya kunika ulwazi oluthe kratya ngomhla ochanekileyo xa kusondela lo mzuzu. Nangona sinokuqinisekisa ukuba ixabiso lalo liya kuba 349 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG Q7 iza kufika eSpain ngoJuni nge-349 euros
Hlaziya i-Insta360 Pro